Noopept Nhungamiro: Chii Chingaitwa Noopept Kwauri? - Shangke Chemical
Noopept powder ndeye neuroprotective mushonga unosimudzira mashandiro ehuropi senge kusangana uye kugadzikana kwepfungwa. Kana iwe uchida kuve neyekuteedzera kwemifananidzo pamwe nekuwedzera kwekutarisa kwakapinza, ino nootropic inogona kunge iri yako knight mune inopenya nhumbi dzokurwa.
Iko kwekutanga kweiyi nootropic kwakadzokera kumashure epakati pe90s muRussia. Masayendisiti ekurapa akaunza noopept poda yekutengesa mumisika yeRussia neEastern Europe seyakagadziriswa yekuziva. Kwemakore, smart drug noopept yakarumbidzwa senototropic ine simba yekusimudzira kugona. Nekudaro, noopept inoderedza kushushikana, kushushikana, uye kusagadzikana.
Iyo yekuwedzera yekutora iyi inonzwisisika inovandudza zvinodhaka ndeyekuti iyo mhedzisiro yemhedzisiro mhedzisiro haina basa.
Noopept Anoita Sei kuBhongo?
Noopept nootropics inomhanyisa kugadzirwa kwehuropi-yakatorwa neurotrophic factor (BDNF) mune hippocampus uye iyo brain cortex. Iyi neurotrophin inoita basa rakakosha mukupona kwemauroni akakosha anobatsira mukufunda nekurangarira.
BNDF inotarisira kupona kwema neuron. Iyo inokonzera kukura uye kusiyanisa kwemasero enzwa. Iyi michina inodzivirira chirwere cheturodegenerative senge Alzheimer's uye dementia. BNDF inowedzerawo mafungu ealpha ayo anobatsira mundangariro kwenguva refu.
Noopept uye piracetam ine maitiro akafanana. Iyo yakangwara zvinodhaka zvinangwa uye inosunga kune iyo glutamate receptors kuti igadzirise yavo synthesis. Yakakwira nhanho yegutamate inokonzeresa apoptosis yemaseru emutsipa nepo mashoma masosi achipindira nemabasa epfungwa Noopept yekuzvidya mwoyo inoshanda kukurudzira kuwedzera kwekutorwa kweglucose mumaseru ehuropi, nekudaro, zvinokanganisa kujekesa kwepfungwa.
Nei Vanhu Vachitora Noopept?
Kubva payakavambwa muna1996, Noopept rave rakanyorwa mushonga kune varwere vane chirwere chemukati chevascular kushaya kukwana. Kunze kwezvo, iwo mushonga weavo vari kunetseka nezera-rine chekuita nekurangarira kupererwa kana dementia.
Noopept yekuzvidya mwoyo inowanikwa seyedhi-the-counter mushonga wekusimudzira mamiriro epfungwa. Vamwe vanhu vakuru vari kutora yakangwara mushonga kurwisa zviratidzo zveAlzheimer's uye Parkinson's hosha.
Vanhu vanofarira uyu mushonga kupfuura mamwe ma nootropics nekuti unoshanda pakarepo. Izvo zvinobatsira zvinonzwika nekukurumidza apo noopept njodzi zvidiki. Kunze kwezvo, madhiragi acho madiki nesarudzo yekubvuta hupfu, kutungamira kwekutonga, kana kumedza mapiritsi.
Zvakanakira Kutora Noopept?
Anoderedza Zviratidzo zveKunzwisisa Kusakwana
Kuziva kuderera kunoitika nekuda kwesescence. Kuchembera kunoita kuti maseru ehuropi aderere, zvichitungamira pakurangarira.
Noopept yekuora mwoyo inoita zvinopesana nemahara mahara, ayo anokonzeresa kushushikana kweiyo oxidative uye kupera kwesero. Naizvozvo, kutora uyu mushonga weurouroprotective kunodzosera kukanganisika zvine chekuita nezera.
Noopept nootropics inorodza ndangariro yako, kunatsiridza kusvinura, uye kugona kudzidza. Iyo mishonga inokwidza kumusoro maalpha mafungu uye huropi-yakatorwa neurotrophic zvinhu, izvo zvine basa rekusvinura uye kubatana kwepfungwa.
Kutenda kune izvi noopept zvinobatsira, vadzidzi varikusarudza yekuwedzera semushonga wekudzidza kana uchigadzirira bvunzo hombe.
Noopept inokubatsira kuti ugare wakanangana nekusimudzira uropi. Iyo inokutendera iwe kutora chikamu mune zvine musoro kufunga uye kunyange kugadzirisa akaomarara akaomarara pasina kurasikirwa nekutarisa. Zvidzidzo zvinoratidza kuti chinodhaka chinodakadza chinofadza mauroni, ayo anoronga kusvinura.
Noopept inobatsira mamiriro epfungwa nekuderedza kushushikana uye kushushikana. Inowedzera simba rako uye inokukurudzira kuti urambe uchienda.
Noopet yekushungurudzika inosimudzira mamoods ako.
Noopept inoderedza oxidative kusagadzikana uye kuzvimba mukati memaseru. Dzinoverengeka mu vitro zvidzidzo zvinoratidza kuti yakanakira zvinodhaka kuverenga mahara radicals. Kunze kwezvo, iyo inoderedza maricho ayo anopindirana neArthritis.
Noopept Inokodzera Iwe Here?
Noopept kutenga inokosheswa kana iwe uchinetseka nekurasikirwa nendangariro kana chero zvimwe zvirwere zveeurodegenerative. Chigadzirwa chacho chakachengeteka uye muviri wako unogona kuzvitsungirira pasina kukonzera guva noopept mhedzisiro.
Kunyangwe iwe uri mudzidzi, bhizinesi, kana mutambi, noopept inovhara zvese zvaunoda. Icho chinoziva chinowedzera uye chinosimudzira kushushikana uye mamiriro ekugadzikana.
Nzira yekutora Noopept Powder?
Iyo yakajairwa zuva nezuva noopept muyero uri pakati pe10mg uye 30mg, zvinoenderana nehuremu hwemuviri wako. Semuenzaniso, kana iwe uri mucheche anorema pazasi pemapaundi mazana maviri, iyo 200mg sarudzo yakanakira yako system. Chero ani pamusoro pe10lbs anogona kuenda kune yakakwira dosi
Kunyangwe iwe uchigona kuparadzira iyo dheti zvinoenderana nezvaunoda, vanhu vazhinji vanotora noopept mushure mekudya. Dzivisa kudya zvinowedzera pamberi pemubhedha nekuti zvinogona kukanganisa maitiro ako ekurara. Neimwe nzira, iwe unogona kuronga mangwanani uye masikati masikati.
Kune vashandisi venguva refu, iyo Noopept kutenderera inogona kukwira kusvika pamazuva makumi matanhatu. Nekudaro, ziva kutora kutora whopping mwedzi mumwe yekuzorora. Neimwe nzira, iwe unogona kuita pfupi pfupi kutenderera kwemazuva mashanu uye mazuva maviri kubva.
Noopept poda kutengeswa inowanikwawo mupiritsi fomu uye seyomumhino yemhino. Kana iwe uchida kuwedzera iro bioavailability yemushonga, unogona kusarudza iyo sublingual manejimendi. Iyi nzira inodarika ma enzymes ekugaya muGIT sezvo inokurumidza kuvhara muropa. Kutenda kune pfupi noopept hafu yehupenyu, iwe unonzwa mhedzisiro muawa kana zvishoma.
Noopept Side Mhedzisiro & Njodzi?
Noopept mhedzisiro isingawanzo pamamiriro ekuti iwe unonamatira kune chaiyo dosi. Zviratidzo zvakajairika zvinosanganisira kutemwa nemusoro, kuda kurutsa, kushaya hope, kutsamwa, uye kupera simba. Yakakwira noopept dosage inokonzeresa kune mazhinji eaya asina kunaka upshots. Kana iwe ukapfuura mwero, ita shuwa yekunwa huwandu hwakawanda hwemvura kuti ureruse mushonga.
Dzimwe njodzi dzisingaite dzinoitika kana iyo yekuwedzera ikabatana nemimwe mishonga. Icho chiero chekuchengetedza kubvunza chiremba wako usati waisa yakangwara mushonga.
Yakanakisa Noopept Stack
Kana iwe uchida kumhanyisa iyo noopept mabhenefiti, iwe uchafanirwa kuisa mamwe mashoma masheya mune yako kutenderera. Nekudaro, izvi zvinogona kunge zvisiri kurudziro kune vatsva avo vachiri kuzonzwisisa zvinoitwa nemushonga weurouroprotective pamiviri yavo. Kana iwe uri wekutanga, zvakanakira iwe kuti ubate noopept seyimire-yega yekuwedzera usati wamhanyira mune nootropic masaga.
Kune akawanda mazano anoviga asi ngatitarisei maitiro mashoma.
1.Noopept, Sulbutiamine, Aniracetam, uye CDP Choline
ichi noopept stack inokwidziridza manzwiro ako uye inokurerutsira kure kusagadzikana uye kushushikana. Iko kusanganiswa kwakanakira kune avo vari pasi pekumanikidzwa kana mumamiriro ezvinhu anoshungurudza. Kwete chete iwe unenge uchikurudzira kuziva kwako asi iwe zvakare uchange uchivhenekera mamiriro ako kuti utsungirire chero matambudziko.
Tora 10mg ye noopept poda, 750mg yeaniracetam, uye 200mg yesalbutiamine.
Vamwe vashandisi vanogona kuenda kumberi nekuwedzera caffeine kune ino stack.
2.Noopept, Piracetam, uye Choline
Choline ndeye tsika yekuwedzera kune angangoita ese nootropics. Kukosha kweichi chigadzirwa mune noopept stack ndeyekudzivirira kutemwa nemusoro, izvo zvinogona kuitika mushure mekutora yakangwara mushonga.
Zvakare, piracetam inomhanyisa mhedzisiro yeoopept nekuita pane maurotransmitter ekuvandudza kugona. Kufanana kweiyo mashandiro ekuita kweaya maviri maRacetam zvinoreva kuti noopept mabhenefiti anowedzera kumusoro.
Kune 10mg ye noopept poda, iwe unogona kuomesera ne 2g ye piracetam.
3. Kwete, Alpha GPC uye Huperzine A
Huperzine A inowedzera basa reacetylcholine muuropi. Iyi neurotransmitter inowedzera ndangariro, kudzidza uye kusvinura. Alpha GPC inochengetedza huwandu hwakanyanya hwe choline muuropi.
Ita shuwa yekutora inenge mazana matatumg yeAlpha GPC.
Kana iwe uri kututira noopept uye adrafinil kuti uwedzere kufunga kwako kwepfungwa, iwe unofanirwa kushandisa dosi ye20mg uye 300mg, zvichiteerana.
Noopept Powder Ongorora
Heano mamwe eongopept ongororo kubva kune vashandisi;
"Kwandiri zvinoshanda chaizvo ipapo chaicho, asi iko kuora kwakashata."
"Ini ndanga ndichiwana hutsi hwehuropi pane noopept saka ndakawedzera piracetam uye choline. Inondishandira sedumwa pamwe chete… ”
“Ndiro randinodisisa, uye ndave ndichiishandisa mukati uye kunze kwemakore maviri. Ndakaedza akawanda nootropics uye ini ndiri kunyanya asiri-anopindura kumakwikwi, asi ini ndinoona kuti noopept inowedzera yangu yekushanda uye pfupi-yenguva ndangariro (masvomhu epfungwa, kurukurirano yekurangarira) zvine simba kwazvo. Ndinoona zvakare kuvandudzwa kukuru kwekutaura kwemanyoro uye kunyora rondedzero… ”
Inobatsira kuti urambe wakatarisana. Inotaridzika kurangarira zvinhu kana kuyeuka. Inoita kuti iwe uwane zero muzvirongwa. Masvinu anoita sekunge akasvinura uye hapana chinotapira senge cafeine yakawandisa. "
“Ndanga ndichitora 10g mazuva ese kwemwedzi yakati wandei uye ndinofara nazvo! Ini ndinoitora ndisati ndaenda kubasa uye ndakapinza zuva rese. "
Noopept inokuwana yakakwira here?
Noopept ndeye munyoro inomutsa isina kana euphoria kana psychostimulation.
Noopept inoshanda nekukurumidza here?
Noopept hafu-hupenyu iri pakati pemakumi matatu kusvika makumi matanhatu maminitsi. Iwe unozotanga kunzwa mhedzisiro yeiyi smart drug muawa nehafu. Iyi sensation inorarama kweanosvika maawa mana.
Noopept ndiyo yakanakisa nootropic?
Iko kunyorwa kweanopept kupinda muropa kunoitika mukuputika. Yaro metabolism inokurumidza kupfuura mamwe marangi. Mushonga wakangwara uri padanho rakaderera mumaminetsi makumi maviri mushure mekutonga. Nekudaro, iyo ndiyo yepamusoro yekuwedzera kune avo vanoda mhedzisiro mhedzisiro ine mashoma noopept njodzi.
Ichi chinowedzera chakachengeteka. Iwe unogona kana kuishandisa seyakamira-yega yekuwedzera kana kuibika neimwe imwe nootropics. Nekudaro, ita shuwa yekutevera iyo chaiyo dosi.
Unogona kushandisa noopept kwenguva yakareba kunge gore. Seyero yekuchengetedza, simbisa kuti uzvipe iwe kuzorora kwemazuva makumi matatu mushure mekutenderera kwemwedzi miviri.
Ko Noopept ndeye mujaho?
Hongu. Noopept poda inotorwa kubva kumhuri ye racetam. Nekudaro, ichi chekuziva chinosimudzira chinosvika kakapetwa kazana zvine simba kudarika akawanda maRacetam. Semuenzaniso, kana iwe ukayera pakati pemhedzisiro yeoopept uye piracetam, iyo yekutanga inoshanda nekukurumidza uye nemazvo.
Uyezve, metabolism yeiyi yekuziva inosimudzira inokurumidza kupfuura mazhinji nootropics.
Noopept inorambidzwa here?
MuRussia, iwe unogona kuputira kunze pa noopept pasina mishonga. Nekudaro, kuUK, imhosva kupana kana kuendesa iyo smart drug. Iyo FDA inobvumira kuendesa kunze kwenyika noopept pane mamiriro ekuti iyo yekuwedzera inonyorerwa zvakakwana. Kushandiswa kwayo sechinhu pamusoro-payo-pombi chinhu chinoramba chisiri pamutemo.
Noopept anonzwa sei?
Mushure meawa yekuraira Noopept powder, iwe uchanzwa uchiunganidzwa nepfungwa dzakapinza, kutarisa, uye kusvinura.
Maitiro ekuyera sei Noopept dozi?
Imwe chete Noopept dosage idiki sedonhwe remvura. Kuti utungamirire fomu yeupfu, iwe unozofanirwa kutenga milligram sikero yekuyera iwo chaiwo muyero.
Kangani iwe unogona kutora Noopept?
Noopept idosi yezuva nezuva. Unogona kuitisa zvese kamwechete kana kupatsanura dhezi kuita maviri. Nekushandisa-pfupi-pfupi, unogona kuitisa inenge awa imwe usati waita basa rakapihwa. Nekudaro, vamwe vashandisi vanozvishandisa kwenguva yakareba kunge gore uye zvakareba. Muchiitiko ichi, simbisa kuva nemazuva maviri kubva pamazuva mashanu kana mwedzi mumwe uchinge wagona kwemazuva makumi matanhatu.
Ndeipi fomu yeNoopept iri nani, Capsule kana Powder fomu?
Mafomu ese ari maviri akakura zvichienderana nezvaunoda. Semuenzaniso, zviri nyore kupinza makapu kana achinge akazara zvakakwana. Iyo yakadzika yeiyi sarudzo ndeyekuti mapiritsi e-noopept anouya neketuru yemutengo.
Contrariwise, noopept poda fomu ine bhajeti-inoshamwaridzika. Iwe unogona kuimedura iyo mukunwa kwako kana kunyange kuibhuroka pairi.
Cycle Noopept Stacks kana Kwete?
Kushambadzira kunokupa imwezve mibairo nekumhanyisa mhedzisiro uye kudzokorora mhinduro. Semuenzaniso, kana iwe ukakanda noopept uye adrafinil, iwe uchasangana nekugara-kwenguva refu kwekutarisa uye kutariswa kwakanyanya. Makambani haafanire kuita chero humwe hwekubatanidzwa kunze kwekunge miviri yavo ichikudziridza kushivirira kune nootropics.
Kwaunoda kutenga Noopept poda
Zvitoro zvepamhepo ndizvo nzvimbo dzakaringana kana uchitsvaga noopept poda yekutengesa sezvo ivo vachibvumidza iwe kuenzanisa mitengo pakati pevatengesi vakasiyana. Kunze kwezvo, iwe unogona kutarisa kuburikidza nemakasitoma ratings uye kuongorora iwo mutengesi chimiro.
Misika mitema isingaverengeke yakabuda asi iwe unofanirwa kuve wakangwarira uye woita yakanaka yekutenga kubva kune inoshanda vatengesi. Takadzikisa pasi kutsvaga kwako mutengesi wepamhepo wepamhepo nekupa iwe chibvumirano chakanyanya. Chitoro chedu chinokupa iwe ruzivo rwese rwaunoda iwe usati watenga mushonga wakangwara. Isu tine zvakare rakatsidzirwa track rekodha yekutengesa zviri pamutemo nootropics kune vatengi vedu.
Ostrovskaya, RU, Vakhitova, YV, et al. (2014). Neuroprotective Mhedzisiro yeNovel Cognitive Enhancer Noopept paAD-inoenderana neCellular Model Inosanganisira Kufunga kweApoptosis uye Tau Hyperphosphorylation. Chinyorwa cheBiomedical Sayenzi.
Vakhitova, YV, et al. (2016). Mhemolero Mechanism Yepashure po Chiito Cheku Substituted Pro-Gly Dipeptide Noopept. Acta Naturae.
Zainullina, LF, et al. (2019). Zvinodhaka neNeuroprotential Zvivakwa Noopept Hazvikurudzire Kuwedzera Kwemasero. Bulletin yeAcyumental Biology uye Mushonga.
Ostrovskaya, RU, et al. (2008). Noopept Inokurudzira Kuratidzira kweNFF uye BNDF muRat Hippocampus. Bulletin yeAcyumental Biology uye Mushonga.
Ostrovskaya, RU, Radionova, SK, uye Belnik, PA (2008). Yekutanga Nootropic Drug Noopept Inodzivirira Memory Deficit mumakonzo neMuscarinic uye Nicotinic Receptor blockade. Bulletin yeAcyumental Biology uye Mushonga.
Kovalenko, PL, et al. (2002). Anti-anopisa Zvivakwa zveNoopept (Dipeptide Nootropic Agent GVS-111). Kwayedza uye Clinical Pharmacology.
RAW NOOPEPT PODA (157115-85-0)
1.Ho zvinoita Sei Noopept KuBongo?
2.Vanhu Vanhu Vanotora Noopept?
3.Benefits dzekutora Noopept?
4.Noopept Inokodzera Iwe Here?
5.Ko Tora Sei Noopept Powder?
6.Noopept Side Mhedzisiro & Njodzi?
8.Noopept Powder Ongorora